SETHA FUTHI LUNGISELELA ISEVA YE-FTP KU-WINDOWS 10 IGXATHU NEGXATHU UMHLAHLANDLELA 2021 - I-WINDOWS 10
Setha Futhi Lungiselela iseva ye-FTP ku-Windows 10 igxathu negxathu Umhlahlandlela 2021
Ufuna Ukusetha iseva ye-FTP ku-Windows PC? Lapha lokhu okuthunyelwe sihamba ngesinyathelo ngesinyathelo ukuthi ungakwenza kanjani Setha i-FTP Server ku-Windows , Setha ifolda kukhompyutha yakho ye-Windows njengendawo yokugcina i-FTP, Vumela iseva ye-FTP nge-Windows Firewall, Yabelana ngefolda namafayela ku-Finyelela nge-server ye-FTP bese uwafinyelela kumshini ohlukile nge-Via Lan noma i-Wan. Futhi, Nikeza ukufinyelela kusayithi lakho le-FTP ngokukhawulela abasebenzisi ngegama lomsebenzisi / iphasiwedi noma ukufinyelela okungaziwa. Ake siqale.
Okuqukethwe umbukiso 1 Kuyini i-FTP? ezimbili Ungayisetha kanjani i-FTP Server kuWindows 2.1 Nika amandla isici se-FTP 3 Ungayilungiselela kanjani iseva ye-FTP ku-Windows 10 4 Vumela i-FTP ukuthi idlule kwiWindows Firewall 5 I-FTP port (21) Idlulisela ku-Router 6 Finyelela kuseva ye-FTP kusuka kunethiwekhi Ehlukile 7 Landa futhi ulayishe amafayela, amafolda kusiphakeli se-FTP 8 Phatha i-FTP usebenzisa iFayilezilla
I-FTP imele iphrothokholi yokudlulisa amafayela Isici esiwusizo sokudlulisa amafayela phakathi komshini weklayenti neseva ye-FTP. Isibonelo, wabelana ngamafolda athile wefayela kusethaphu elungiselelwe Iseva ye-FTP kunombolo ethekwini, Futhi umsebenzisi angafunda futhi abhale amafayela ngephrothokholi ye-FTP kusuka noma yikuphi. Futhi iziphequluli eziningi zisekela umthetho olandelwayo we-FTP ukuze sikwazi ukufinyelela kumaseva we-FTP ngokusebenzisa isiphequluli sisebenzisa I-FTP: // YOURHOSTNAME noma Ikheli le-IP.
Ungayisetha kanjani i-FTP Server kuWindows
Ukuze ubambe iseva ye-FTP, ikhompyutha yakho kufanele ixhumeke kunethiwekhi engenantambo. Futhi ngidinga ikheli le-IP elisesidlangalaleni ukufinyelela amafolda wokulayisha / wokulanda amafayela kuseva ye-FTP kusuka endaweni ehlukile. Ake silungiselele i-PC yakho Yasekhaya ukuthi isebenze njengeseva ye-FTP. Ukuze senze lokhu kuqala sidinga ukunika amandla isici se-FTP ne-IIS (IIS iyiphakheji yesoftware yewebhu ongafunda kuyo lapha ).
Qaphela: Ngezansi kwezinyathelo ezisebenza futhi ekusetheni nasekumiseni isiphakeli se-FTP kumawindows 8.1 no-7!
Nika amandla isici se-FTP
Ukunika amandla izici ze-FTP ne-IIS,
Cindezela iWindows + R, thayipha insiza.cpl futhi kulungile.
Lokhu kuzovula izinhlelo nezici zeWindows
Chofoza ku-'Vula noma uvale izici zeWindows '
Guqula Izinsizakalo Zolwazi lwe-Intanethi , bese ukhetha Iseva ye-FTP
Zonke izici ezikhethiwe kumele zifakwe.
Cindezela KULUNGILE ukufaka izici ezikhethiwe.
Lokhu kuzothatha isikhashana ukufaka izici, linda uze uqede.
Ngemuva kwalokho qala kabusha iWindows Ukuqalisa ushintsho.
Ungayilungiselela kanjani iseva ye-FTP ku-Windows 10
Ngemuva kokunika amandla ngempumelelo isici se-FTP manje landela izinyathelo ezingezansi ukumisa iseva yakho ye-FTP.
Ngaphambi kokuthi uqhubeke kuqala ukudala ifolda entsha noma ikuphi bese uyiqamba igama (ngokwesibonelo iseva ye-Howtofix FTP)
Qaphela phansi ikheli lakho le-IP IP (Ukubheka lo myalo ovulekile we-Prompt, thayipha ipconfig ) lokhu kuzobonisa ikheli lakho le-IP lendawo kanye nesango elizenzakalelayo. Qaphela: Kufanele usebenzise i-IP emile kuSystem yakho.
Futhi uma uhlela ukufinyelela kumafayili wakho we-FTP ngenethiwekhi ehlukile, kuzodingeka ube nekheli le-IP elisesidlangalaleni. Ungacela i-ISP yakho ukuthola ikheli le-IP lomphakathi. Ukuhlola uhlobo lwesiphequluli sakho se-IP esivulekile se-IP yomphakathi yini i-IP yami lokhu kuzoveza ikheli lakho le-IP lomphakathi.
Thayipha Amathuluzi Wokuphatha ekusesheni kwemenyu yokuqala bese ukhetha kusuka kumiphumela yosesho.
Futhi, ungafinyelela okufanayo kusuka kuphaneli yokulawula -> zonke izinto zephaneli yokulawula -> amathuluzi okuphatha.
Bese ubheke umphathi wensizakalo yolwazi lwe-Intanethi (IIS), bese uchofoza kabili kuyo.
isimo sephutha lephrinta windows windows 10
Ewindini elilandelayo, nweba i-localhost (ngokuyisisekelo igama lakho le-PC) kuphaneli yakho yangakwesobunxele bese uzulazula uye 'kumasayithi.'
Qhafaza kwesokudla 'amasayithi' bese ukhetha 'engeza isiza se-FTP'. Lokhu kuzokwakhela uxhumano lwe-FTP.
Nikeza igama kusayithi lakho bese ufaka indlela yefolda ye-FTP ofuna ukuyisebenzisa ukuthumela nokwamukela amafayela. Lapha sisethwe indlela yefolda esidale yona ngaphambili iseva ye-FTP. Ngenye indlela, futhi ungakhetha ukudala ifolda entsha ukugcina amafayela wakho we-FTP. Kuya kuphela ngokuncamelayo okuthandayo.
Chofoza u- “ngokulandelayo.” Lapha udinga ukukhetha ikheli le-IP lekhompyutha yendawo kusuka kubhokisi lokudonsela phansi. Ngiyethemba usuvele usethe i-IP emile yekhompyutha.
ishiye inombolo yetheku 21 njengenombolo ethekwini ezenzakalelayo yeseva ye-FTP.
Futhi shintsha ukulungiselelwa kwe-SSL kuthi “ayikho i-SSL.” Shiya ezinye izilungiselelo ezizenzakalelayo.
Qaphela: Uma ulungiselela isiza sebhizinisi, qiniseka ukukhetha inketho ethi 'Dinga i-SSL', ngoba izokwengeza isendlalelo esingeziwe sokuphepha ekudlulisweni.
Chofoza 'okulandelayo' futhi uzothola isikrini sokufakazela ubuqiniso.
Zulazula kusigaba sokuqinisekisa salesi sikrini, bese ukhetha inketho “eyisisekelo”.
Esigabeni sokugunyazwa, thayipha 'abasebenzisi abacacisiwe' kusuka kumenyu yokudonsela phansi.
Ebhokisini lombhalo elingezansi, thayipha igama lomsebenzisi le-Windows 10 akhawunti yakho ukuze unikeze ukufinyelela kuseva ye-FTP. Ungangeza nabasebenzisi abaningi uma uthanda.
Esigabeni semvume, udinga ukunquma ukuthi abanye bazolithola kanjani isabelo se-FTP nokuthi ngubani ozoba nokufinyelela kokufunda kuphela noma ukufunda nokubhala.
Ake sicabange ngalesi simo: Uma ufuna abasebenzisi abathile babe nokufunda nokubhala ukufinyelela, ngakho-ke kusobala ukuthi kufanele bathayiphe igama lomsebenzisi nephasiwedi yalo. Abanye abasebenzisi bangafinyelela kusayithi le-FTP ngaphandle kwegama lomsebenzisi noma iphasiwedi ukuze babuke okuqukethwe kuphela, kubizwa ukufinyelela kwabasebenzisi abangaziwa. Manje Chofoza Qeda.
Ekugcineni, chofoza u- “qeda.”
Ngalokhu, usuqedile ukusetha iseva ye-FTP kuwe Windows 10 umshini, kodwa, kufanele wenze ezinye izinto ezengeziwe ukuqala ukusebenzisa iseva ye-FTP ukuthumela nokwamukela amafayela.
Vumela i-FTP ukuthi idlule kwiWindows Firewall
Isici sokuphepha seWindows Firewall sizovimba noma yikuphi ukuxhumana okuzama ukufinyelela kuseva ye-FTP. Futhi yingakho sidinga ukuvumela ukuxhumana mathupha, futhi sitshele i-firewall ukuthi inikeze ukufinyelela kule seva. Ukuze wenze lokhu
Qaphela: Kulezi zinsuku izibhulamlilo zilawulwa uhlelo lokusebenza lwe-Antivirus, Ngakho-ke noma ngabe udinga ukumisa / Vumela i-FTP ukusuka lapho noma Khubaza ukuvikelwa kwe-Firewall ku-Antivirus yakho
windows 10 iqhubeka nokubuyekeza futhi yehluleke
Sesha i-Windows firewall kumenyu yokuqala ye-Windows bese ucindezela u- “enter.”
Kwiphaneli engakwesokunxele, uzobona okuthi 'vumela uhlelo lokusebenza noma isici ngenketho ye-Windows Firewall'. Chofoza kuso.
Lapho iwindi elilandelayo livula, chofoza inkinobho ethi 'shintsha izilungiselelo'.
Kusuka ohlwini, hlola “iseva ye-FTP” bese uyivumela kuwo womabili amanethiwekhi wangasese nawomphakathi.
Uma usuqedile, chofoza KULUNGILE
Yilokho kuphela. Manje, kufanele ukwazi ukuxhuma kuseva yakho ye-FTP kusuka kunethiwekhi yakho yangakini. Ukubheka lesi siphequluli seWebhu esivulekile Ku-PC ehlukile exhunywe kuhlobo olufanayo lwenethiwekhi ftp: // yourIPaddress (Qaphela: lapha sebenzisa ikheli le-IP leseva ye-FTP le-FTP). sebenzisa igama lomsebenzisi nephasiwedi owavumela ngaphambilini ukufinyelela kuseva ye-FTP.
I-FTP port (21) Idlulisela ku-Router
Manje iWindows 10 FTP Server inikwe amandla ukutholakala kusuka ku-LAN. Kepha uma ufuna ukufinyelela iseva ye-FTP kusuka kunethiwekhi ehlukile (ohlangothini lwethu lwe-LAN) kuzodingeka uvumele ukuxhumeka kwe-FTP, futhi kufanele unike amandla iPort 21 ku-firewall yomzila wakho ukuvumela ukuxhumana okungenayo nge-FTP port 21.
Vula ikhasi lokumisa i-Router, usebenzisa i-Default Gateway Address. Ungahlola isango lakho elizenzakalelayo (ikheli le-IP le-router) usebenzisa umyalo we-Ipconfig.
Kimi kungu-192.168.1.199 lokhu kuzocela ubuqiniso, Thayipha igama lomsebenzisi lomsebenzisi ne-password. Lapha kusuka kuzinketho ezithuthukile funa ukudluliselwa kwePort.
Ukuvuselelwa kwamawindows 10 kwehlulekile
Dala ukuthunyelwa kwembobo okusha okufaka imininingwane elandelayo:
Igama lesevisi: Ungasebenzisa noma yiliphi igama. Isibonelo, i-FTP-Server.
Ukufutheka kwembobo: Kufanele usebenzise itheku 21.
Ikheli le-TCP / IP le-PC: Vula i-Command Prompt, thayipha ipconfig, nekheli le-IPv4 ikheli lePC yakho lePCP / IP.
Manje Faka izinguquko ezintsha, bese ulondoloza ukucushwa okusha kwendlela.
Finyelela kuseva ye-FTP kusuka kunethiwekhi Ehlukile
Konke kusethwe manje, iseva yakho ye-FTP isilungele ukufinyelela kusuka noma ikuphi i-PC exhunywe kwi-inthanethi. Nakhu ukuthi ungalihlola kanjani ngokushesha isiphakeli sakho se-FTP, ngiyethemba ubonile ikheli lakho le-IP Yomphakathi (Lapho wamise khona iseva ye-FTP, Ngaphandle kwalokho vula isiphequluli bese uthayipha i-whats IP yami)
Iya kunoma iyiphi ikhompyutha ngaphandle kwenethiwekhi bese uthayipha ikheli le-FTP: // IP kubha yokusesha. Kufanele ufake igama lomsebenzisi nephasiwedi futhi bese uqhafaza KULUNGILE.
Landa futhi ulayishe amafayela, amafolda kusiphakeli se-FTP
Futhi, ungasebenzisa izinhlelo zokusebenza ezivela eceleni njenge ( I-FileZilla ) ukulanda ukuphatha amafayela, Amafolda phakathi komshini weklayenti ne-FTP Server. Kunamaklayenti amaningi we-FTP wamahhala ongawasebenzisa ukuze uphathe iseva yakho ye-FTP:
I-FileZilla : iKlayenti le-FTP litholakala ngeWindows
ICyberduck : Iklayenti le-FTP liyatholakala ngeWindows
I-WinSCP : Umthombo wamahhala futhi ovulekile we-SFTP, i-FTP, i-WebDAV, i-Amazon S3 ne-SCP iklayenti le-Microsoft Windows
Phatha i-FTP usebenzisa iFayilezilla
Masisebenzise isoftware yeklayenti leFayileZilla ukuphatha amafolda wamafayela (wokuLanda / wokulayisha) kuseva ye-FTP. Ilula kakhulu, Vakashela isiza esisemthethweni seFayilezilla futhi landa iklayenti leFayilezilla amafasitela.
Qhafaza kwesokudla kuso bese uqalisa njengomphathi ukufaka uhlelo lokusebenza.
Ukuvula uhlobo olufanayo Filezilla ekusesheni kwemenyu yokuqala bese ukhetha.
Ngemuva kwalokho Faka imininingwane ye-FTP Server, ngokwesibonelo, ftp://10.253.67.24 (IP Yomphakathi) . Thayipha igama lomsebenzisi olivumele ukuthi lingene kwiseva yakho ye-FTP ukusuka noma ikuphi thayipha iphasiwedi ukuze uqinisekise futhi usebenzise itheku 21. Uma uchofoza i-Quickconnect lokhu kuzoklelisa wonke amafolda efayela akhona ukulanda. Amafasitela ohlangothini lwesobunxele emshinini wakho nakwesokudla yi-FTP Server
Futhi lapha Hudula amafayela kusuka kwesobunxele uye kwesokudla azokopisha ukuhanjiswa kwefayela kuseva ye-FTP bese uhudula amafayela ukusuka kwesokudla uye kwesobunxele azokopisha ukuhanjiswa kwefayela kumshini weklayenti
Yilokho kuphela okudale ngempumelelo futhi walungisa ifayela le- Iseva ye-FTP ku-Windows 10 . Uke wahlangabezana nanoma iyiphi inkinga ngenkathi ulandela lezi zinyathelo, usazise kumazwana angezansi, senza konke okusemandleni ukukuqondisa.
I-Ethernet ayinakho ukucushwa kwe-IP okuvumelekile (Inethiwekhi Engaziwa) Windows 10
I-WiFi ixhunyiwe kepha akukho Ukufinyelela kwe-inthanethi Windows 10 (5 ukulungisa fixes)
Ungakusetha kanjani futhi ulungiselele ukuxhumeka kwe-VPN Windows 10/8/7?
Iseva ye-DNS ayiphenduli ku Windows 10? Sebenzisa lezi zixazululo
iphutha elibucayi imenyu yakho yokuqala
Isikrini esimnyama sekhompyutha esinezikhombisi
isevisi yomsizi womshayeli we-nvidia ayikho
windows 10 isikrini esimnyama esinezikhombisi ngemuva kokungena ngemvume ngo-2018
ukubuyiselwa kwesistimu akuqedanga